मुख्य डेस्क « Himal Post | Online News Revolution
शोभालक्ष्मीको स्मृतिमा परिवारजनले बनाए त्रिवेणीघाटमा १५ लाख लगानीमा प्रतिक्षालय
बुटवल । स्व. शोभालक्ष्मी श्रेष्ठको स्मृतिमा परिवारजनले त्रिवेणी घाटमा प्रतिक्षालयको स्थापना गरेका छन् । बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ नवलपरासीको त्रिवेणी घाटमा प्रतिक्षालय स्थापना गरीएको हो । प्रतिक्षालयको सोमबारे
नेता खड्काको १३ औं दिन अर्घाखाँचीमा शोक सभा
सन्धिखर्क । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिती अर्घाखाँचीले एक कार्यक्रमका विच शोक सभा सम्पन्न गरेको छ । नेपाली केन्द्रीय सदस्य, पुर्व महामन्त्री तथा पुर्व गृहमन्त्री स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काको निधन भएको
आत्महत्या रोक्न छोटो चलचित्र निर्माण
बुटवल । आत्महत्या गर्ने सामाजिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बुटवलमा एक छोटो चलचित्रको प्रेमियर शो गरिएको छ । बुटवल उप–महानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुबेदी को प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा
महिला हिंसा अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
पूजा पन्थी : बुटवल । महिला अधिकारकर्मीहरुले महिला हिंसा न्युनीकरणको लागि छाता कानून बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको पाँच नम्बर प्रदेश
प्रदेशसभाकाे बैठक अाज,निति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसुचि
अाचार्य प्रदिप : बुटवल । प्रदेशसभा ५ को बैठक आज बस्दै छ । आजकाे बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने छ । आज दिउसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश
बुटवल महिला जेसिजको सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
बुटवल । बुटवल महिला जेसिजको आयोजनामा पूर्व अध्यक्ष सम्मान, नयां वर्ष २०७५ को शुभकामना आदान प्रदान तथा वनभोज कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी प्रदेश न ५ का
मिष्टर एण्ड मिस एसइइ सुरु, पहिलो अडिसनमा १३ जना छनोट
बुटवल । प्रदेश नं. ५ वाट एसइइ परिक्षा दिएकाहरुलाइ लक्षित गरि आयोजना गरिएको मिष्टर एण्ड मिस एसइइ प्रदेश नं. ५ को पहिलो अडिसन सकिएको छ । मञ्जरी ग्रुपको आयोजना गेटवे
४७ करोडको लागतमा छत्तिस मौजा सिचाई व्यवस्थित बन्दै
बुटवल । रुपन्देहीको सबैभन्दा ठूलो र दक्षिण एसियाकै नमुना मानिएका २ सय भन्दा पुरानोे छत्तिस मौजा सामुदायिक सिचाई प्रणाली अब व्यवस्थित हुने भएको छ । करिव ३६ सय हेक्टर जमिन
पुस्तक बितरण गर्न बुटवलमा जनक शिक्षा सामाग्री
बुटवल । पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेर आलोचित बन्दै आएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले अहिले आवश्यक पुस्तकहरु उपलब्ध गाराउने बताएको छ । शैक्षिक सत्र भित्र पुस्तक पुराउन नसकेर विगतदेखि जनक शिक्षा
तेस्राे मदन भण्डारी गाेल्डकपकाे उपाधि थ्रिस्टारलाई
बुटवल । बुटवलमा भएकाे तेस्राे मदन भण्डारी गाेल्डकपकाे उपाधि थ्रिस्टारले जितेकाे छ । साेमबार भएकाे फाईनलमा २-१ ले मनाङ मर्स्याङ्दीलाई पराजित गर्दै थ्रिस्टारले उपाधि रक्षा गरेकाे हाे । उपाधिसंगै थ्रिस्टारले नगद
उपाधि दौडमा मनाङ र थ्रिस्टार
बुटवल । सर्वाधिक राशीको गोल्डकप उचाल्न दुई एडिभिजन फुटबल क्लब आमने सामने हुने भएका छन् । १५ लाख राशीको मदन भण्डारी गोल्डकपको उपाधिका लागि मंगलबारको फाइनलमा मनाङ मस्र्याङ्दी र थ्रिस्टार मैदानमा
ओभरलोड बोकेका गाडी नियन्त्रणमा
दिपा महत : कपिलवस्तु ।कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार नाकाबाट ओभरलोड बोकेका गाडी नियन्त्रणमा लिइ चेकजाँचमा कडाइ गरिएसँगै भन्सार राजश्व दोव्वरले बृद्धि भएको छ । देशभरका भन्सार कार्यालयमा हुने चुहावटलाइ रोकथाम गरी